Leenjisaan Itoophiyaa garee atileetiksii biyyaalessa Chaayinaa leenjisaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Musxafaa Hajii
Leenjisaan atileetiksii lammii Itoophiyaa garee atileetiksii biyyaalessaa Chaayinaa leenjisuuf waliigaluun barame.
Leenjisaan kun Chaayinoota leenjisuun isaa fiigichi dhedheeraan akka sadarkaa addunyaatti dorgomaafi hawwataa taasisuuf ni gumaacha jedha.
''Fiigicha dheeraafi giddugaleessaan nan leenjisa. Waliigalteen kuni ammaaf anumaa fi Federeeshinii (atileetiksii) Chaayinaa gidduuttii raawwate,'' jechuun Hajii Adiloon BBC'tti himaniiru.
Gaggeessaa biyyasaa fayyisuuf waadaa gale
'Yakkamtoota hunda seeratti dhiyeessuun waan hin oolledha'
Leenjisaan kuni atileetota Chaayinaa 11 Olompikii Tookiyoo bara 2020 fi Shaampiyoonaa Atileetksii Addunyaa barana Dohaatti dorgomamuuf akka qopheessanis imaanaan irra ka'ameera.
Leenjisaan atileetiksii Itoophiyaa garee atileetiksii biyyaalessaa Chaayinaa yeroo leenjisu kuni kan jalqabaati.
Atileetonni kunneen Chaayinaadhaa dhufani Finfinneetti kan leenji'an yoo ta'u, ''waggaa lamaaf hanga Olompikii Tookiyootti waliigaltee raawwanneera,'' jedhan.
Leenjisaan Itoophiyaatti akka bu'aa 'Elite Sports Management International' ta'an kuni Afaan Chaayinaa wallaalanis nama isaaniif hiiku akka jiru dubbataniiru.
Hajiin leenjisummaan alatti Itoophiyaatti bakka bu'aa atileetotaa (manager) ta'un hojjetu.
Akkamiin waliigaltee raawwachuu akka danda'an yoo himanis, ''Atileetota qabxii fidan duuba eenyutu jira kan jedhu qoratanii natti fakkaata,'' jedhaniiru.
Dhugaalee dinqisiisoo paaspoortii 13 kanneen beektuu?
Waligaltee kanaaf qarshii hangamii akka kanfalameef dubbachuu hinfeene.
Atileetota kanaan dura leenjisanii sadarkaa gaariirra geessisan yoo eeran, "Atileetonni baayyee leenjisaan ture. Bara 2006 irraa eegalee garuu gaggeessummaan jalqabe. Atileetota warra akka Fayisaa Leellisaa, Margaa, Xayibaa Hirkisoo, Leellisaa Deesisaa, Amaanee Goobanaa, ijoollee baayyee baayyeetu jiru. Ijoollee baayyee waan ta'aniif kan himeen kam dhiisa, hedduu leenjiseera," jedhaniiru.
Lammilee biyya biraa fiigichaa dheeraaf leenjiisuu
Wayiti ammaa yeroo itti atileetonni Itoophiyaa, keessattuu isaan maraatoonii isa jalatti leenji'aa jiraniitti atiletoota Chaayinaa dorgommiidhaaf qopheessuuf dhiibbaa hin fiduu gaaffii jedhuus gaafatamanii ture. Haajii Adiloon garuu: "kun ispoortiidha waan ta'ee abbaan jabaatee hojjetetu injifate," jedhe leenjisaan kun.
Kana malees, dhugaan beekamu qabaatu guddaan isipoortii gosa adda addaa addunyaa irra tursiisuuf biyyaanni addunyaa gara garaa keessatti dorgomtoota ciccimoo ta'uun barbaachisaadha jedhan.
Pireziidaantiin duraanii Jeekob Zuumaa albamii sirbaa gadhiisuufi
Fakkeenyaaf jedhan leenjisaan kun, fiigicha dhedheeraa irratti yeroo hedduu Itoophiyaa fi Keeniyaatu waldorgoma. Biyyoonni hedduun waan sirriitti keessatti dorgoman dhiibuun ammoo warri dorgommii qopheessanii fi ispoonsara godhan fedhii dhabaa deemu.
Kanaafu furmaanni isaa, biyyoonni gara garaa akka keessatti dorgomtoota ciccimoo ta'an gochuun gaarii ta'e jedhan.
Akka Leenjisaa Hajii Adiloon jedhanitti biyya biraa kan akka Chaayina kana leenjisuun fiigicha dhedheeraa kan akka meetira 10,000 ittiin Itoophiyaan beekamtee sadarkaa addunyaatti dorgomtuu fi hawwattu tatuu taasisuuf ni gargaara.
Atileet Qananiisaan Kipchoogee fi qopheessitoota maaraatoonii Landan qeeqe
23 Elba 2018
Maaraatoonii Niiw Yoork: Leellisaa Deessisaa fi Shuraa Qixxaataan 1ffaa fi 2ffaa galaniiru
Fiigicha Guddicha Itoophiyaa: Qorannoon qoricha nama jajjabeessuu ni adeemsifama
Mootummaan sirna owwaalcha maanguddoo koronaavaayirasiin du’anii ofumaa raawwate
Ministirri Muummee UK Booriis Joonsan hospitaala galan
Tiraamp duula vaayirasiirratti taasifamuun 'abdii ifaan' arga jedhan
Ameerikaatti koroonaavaayirasiin qeerramsa qabe
Istaadiyeemiiwwan gara wiirtuu 'adda baasanii tursiisuutti' jijjiiraman